Kheladi - बार्सिलोनाका मेसीकाे पिएसजी सरुवा, कतारको जित
भदौ ११, २०७८ १३:३७
काठमाडौं, (खेलाडी)- लियोनल मेसी अगस्ट १० मा पेरिस सेन्ट जमन (पिएसजी) कोे नयाँ खेलाडी बने । उनले पेरिसको क्लबसँग सम्झौता गरेपछि जर्सी बेच्न राखियो ।
अन्ततः समर्थकले ३० नम्बर लेखिएको जर्सी किन्न त पाउने भए, तर फुटबलमा बिरलै अभ्यास गरिने एउटा शर्त सहित । शर्त के भने, एक समर्थकले एक पटकमा एउटा मात्र जर्सी किन्न पाउने ।
जर्सी किन्न लाइनमा उभिएका पिएसजी समर्थक पेरिसमा बसोबास गर्ने मात्रै थिएनन् । मेक्सिकोबाट पेरिस पुगेका होर्गे रुइज, रिकार्डो लोङगोरिया फ्युन्टेस र रुबी कोमपिन पनि लाइनमा थिए । उनीहरुले उपाय लगाए, पटक पटक लाइनमा उभिने र जर्सी किनिरहने । अन्तिममा उनीहरुले नौं वटा जर्सी जम्मा पारे ।
हुन त आईफोन, प्लेस्टेसन लगायतका सामाग्री सार्वजनिक हुँदा पनि मानिसहरु यसरी नै घण्टौँसम्म लाइनमा उभिन्छन् । खरिद गर्छन् अनि फोटो पनि खिच्छन् ।
मेसीको जर्सी पनि यस्तै महंगो जिनिस बन्यो । तर आईफोन र मेसीको जर्सी सार्वजनिक गर्ने शैलीमा एउटा ठूलो भिन्नता थियो । आईफोन विश्वभरका कैयौँ सहरमा एकैपटक सार्वजनिक गरिन्छ । तर मेसीको जर्सी भने पेरिसमा मात्र सार्वजनिक गरियो ।
मेक्सिको जस्तो सुदूरको देशबाट पनि जर्सी किन्न मानिस फ्रान्स पुगे । रुइज र उनका साथीहरु पिएसजी समर्थक भने होइनन् । तर उनीहरु मेसीलाई विश्वकै सर्वोत्कष्ट खेलाडी मान्छन् ।
मेसी पिएसजीको खेलाडीका रुपमा सार्वजनिक भएको कार्यक्रम हेर्न पुगेका समर्थकहरुलाई देख्दा लाग्थ्यो, उनीहरु महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छन्
त्यही भएर त मेक्सिको जस्तो सुदूरको देशबाट पनि जर्सी किन्न मानिस फ्रान्स पुगे । रुइज र उनका साथीहरु पिएसजी समर्थक भने होइनन् । तर उनीहरु मेसीलाई विश्वकै सर्वोत्कष्ट खेलाडी मान्छन् ।
‘हामी यहाँ मेसीका लागि आएका हौं,’ रुइजले भने ।
मेसी पुग्दा पेरिस विश्व फुटबलको राजधानी बन्यो, कमसेकम केही दिनका लागि । मेसीलाई स्वागत गर्न हजारौं समर्थक पेरिसमा जम्मा भएका थिए । पेरिसमा खुशीयाली मनाइरहेका पिएसजी समर्थक देख्दा यस्तो लाग्थ्यो, फ्रान्सले हालै युद्ध जितेको छ । अथवा मेसी विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूला उपाधि हुन्, जसको विजेता बनेको छ, पिएसजी ।
फुटबलमा कुनै पनि टिम सफल हुने भनेको उपाधि जितेर हो । पिएसजी समर्थकका लागि मेसी उपाधि बने । त्यही भएर त उनीहरु भनिरहेका थिए, मेसी पिएसजीसँग अनुबन्ध भएको दिन उनीहरुको जीवनकै सबैभन्दा खुशीको दिन हो ।
मेसी पिएसजीको खेलाडीका रुपमा सार्वजनिक भएको कार्यक्रम हेर्न पुगेका समर्थकहरुलाई देख्दा लाग्थ्यो, उनीहरु महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छन् ।
अन्य क्लबमा जस्तै पिएसजीमा पनि ‘वाल अफ लेजेन्ड्स’ छ । जहाँ क्लबका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका खेलाडीहरुको तस्बिर सजाइएको छ ।
क्लब स्थापना हुँदा ताकाका जेन पिएर डोगलियनी देखि सन् १९९० दशकका स्टार जर्ज वेयसम्म पिएसजीका भित्तामा देखिन्छन् । अनि सन् २००० दशकका रोनाल्डिन्हो, कतारीले स्वामित्व लिएपछि भित्रिएका ज्लाटान इब्राहिमोभिच पनि । पिएसजीको उमेर ५० कटेको छैन । तर पछिल्लो एक दशकमा पिएसजी युरोपेली फुटबलको शक्ति बनिसकेको छ ।
पिएसजी विश्व फुटबलमा फरक किसिमको शक्ति बनेको छ । यत्तिको बलियो टिम फुटबल इतिहासमा सायदै बनेको थियो
फ्रान्सेली लिग वानको २००७-०८ सिजनमा पिएसजी १६औँ स्थानमा थियो । जुन सन् १९७५ यता पिएसजीको खराब प्रदर्शन थियो । अर्को सिजन भने टोलीले आफ्नो प्रदर्शनमा व्यापक सुधार गर्‍यो । र, लिगमा छैठौं स्थानमा फड्को मार्‍यो । २०१०-११ सिजन सकिँदा पिएसजी शीर्ष चारमा थियो । क्लबको स्वामित्व कतारीले लिए । त्यसपछिको पिएसजी हामीले देखेकै छौं ।
पिएसजीमा लगानी गरेको कतारको पनि बारम्बार आलोचना हुने गरेकै छ । कतारीमाथि आरोप पनि लगाइन्छ, ‘फुटबल दुषित गरेको ।’
पिएसजी विश्व फुटबलमा फरक किसिमको शक्ति बनेको छ । यत्तिको बलियो टिम फुटबल इतिहासमा सायदै बनेको थियो । पिएसजीका समर्थक अन्य ठूला क्लबका समर्थक भन्दा फरक छैनन् । नयाँ खेलाडी अनुबन्धित हुँदा उत्साहित हुन्छन् । क्लबको इतिहासप्रति गर्व गर्छन् । तर पिएसजी कुनै समय कति खराब स्थितीमा थियो भन्ने पनि उनीहरुले बिर्सेका छैनन् ।
पिएसजीबारे प्रायको धारणा छ, ‘यो क्लब पैसाको बलमा माथि आएको हो ।’ पिएसजीमा लगानी गरेको कतारको पनि बारम्बार आलोचना हुने गरेकै छ । कतारीमाथि आरोप पनि लगाइन्छ, ‘फुटबल दुषित गरेको ।’
तर यी तमाम आरोपबीच एउटा तथ्य भने स्विकार गर्नैपर्छ, पीएसजी समर्थक वास्तवमै फुटबल प्रेमी हुन् । उनीहरु आफ्नो क्लबको भविष्यप्रति कति उत्साहित छन् भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ ।
‘म ३२ वर्षको भएँ । पछिल्ला दुई दिन मेरा लागि अविस्मरणीय बनेका छन् । म कुनै १५ वर्षको किशोर जस्तो उत्साहित भएको छु । कयौँ वर्ष म जस्ता पिएसजी समर्थकले पीडामा बिताउनु परेको थियो,’ एलेक्सिज एन्सेलेम भन्छन्, ‘तर ज्लाटान, थिएगो सिल्भा, एमबाप्पे जस्ता खेलाडी आएपछि हामी बलियो बनेका छौँ । अब त हामीसँग मेसी पनि छन् । जो विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् । कुनै दिन मेसीले पिएसजीको जर्सी लगाउनेछन् भनेर कसले अनुमान गरेको थियो र ?’
‘पिएसजीले नेइमार खरिद गर्‍यो । बार्सिलोनालाई पराजित गरियो । मार्सेविरुद्ध कयौँ जित हासिल गरियो । यी सबै सम्झनलायकका क्षण हुन् । तर मेसी ? अहिले पनि विश्वास लागेको छैन
पिएसजी रंगशालाको ठ्याक्कै अगाडि क्लबको आधिकारिक जर्सी स्टोर छ । त्यहाँ लाइन लागेका अधिकांश समर्थक युवा थिए । जो प्राय नेइमार, मार्किन्योस, भेराट्टी जस्ता खेलाडीका जर्सी खरिद गर्थे ।
तर अब उनीहरुको रोजाइ फेरिएको छ । उनीहरु सबैको भाव एउटै थियो, फुटबलकै सबैभन्दा राम्रा खेलाडी पिएसजी आइपुगेका छन् । ‘पिएसजीले नेइमार खरिद गर्‍यो । बार्सिलोनालाई पराजित गरियो । मार्सेविरुद्ध कयौँ जित हासिल गरियो । यी सबै सम्झनलायकका क्षण हुन् । तर मेसी ? अहिले पनि विश्वास लागेको छैन,’ पिएसजीका अर्का किशोर समर्थक डायलान भन्छन् ।
मेसीको पिएसजी सरुवा विश्व फुटबलको सबैभन्दा महंगो सरुवा थिएन । तर पनि यसले विश्व फुटबललाई अवाक् बनायो । आफू प्रेममा रहेको क्लबसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर विश्व फुटबलका रत्न पेरिस पुगे ।
अरु त अरु उनले आफ्ना समर्थकसँग बिदा समेत माग्न पाएनन् । यो क्षणले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिइरहेको थियो, विश्वकै शक्तिशाली फुटबलरको पनि नियति आफूले चाहेको जस्तो हुँदैन । फुटबलमा खेलाडी होइन, परिस्थती बलियो हुन्छ । यसको उदाहरण, मेसीले चाहँदा चाहँदै पनि बार्सिलोना बसाई नलम्बिनु हो ।
पिएसजीतर्फको यात्रा सम्भव नभएको भए मेसीको गन्तब्य म्यानचेस्टर सिटी हुन सक्थ्यो । जहाँ उनी सन् २०१२ मै जान चाहेका थिए । मेसीलाई अनुबन्ध गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत धेरै क्लबको छैन । यो मात्र होइन, विश्वमा कहिलएका खेलाडी खरिद गर्न सक्ने क्लबहरुकै संख्या एकदमै कम छ । यो अवस्था फुटबल खेलका लागि सुखद खबर होइन । यसले फुटबललाई प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाधा पुर्‍याउँछ ।
पिएसजीले करिब २० करोड पाउन्ड खर्चेर नेइमारलाई बार्सिलोनाबाट खोस्नु आधुनिक फुटबलको नयाँ मोड थियो । कठोर भएर भन्ने हो भने, त्यो बार्सिलोनाको लज्जास्पद पराजय थियो
१० वर्षअघिको बार्सिलोना अत्याधिक बलियो थियो । त्यसपछि फुटबल अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले बार्सिलोनलाई सर्वाधिक बलियो टिम बनिरहन दिएन ।
पिएसजीले करिब २० करोड पाउन्ड खर्चेर नेइमारलाई बार्सिलोनाबाट खोस्नु आधुनिक फुटबलको नयाँ मोड थियो । कठोर भएर भन्ने हो भने, त्यो बार्सिलोनाको लज्जास्पद पराजय थियो ।
नेइमारले छाड्नु बार्सिलोनाका लागि ठूलो घाटा थियो । भलै उसले आकर्षक स्थान्तरण रकम कमाएको थियो । बार्सिलोनाले नेइमारको बर्हिगमनपछि नयाँ नेइमारको खोजी गर्‍यो । जसले नेइमारको स्थान लिन सकोस् । तर औसमाने डेम्बेले, फिलप कौटिन्हो, एन्टोनी ग्रिजम्यान लगायतका खेलाडी नेइमार जत्तिको प्रभावकारी देखिएनन् ।
मेसीको आगमनले अब लिग वानले ‘फामर्स लिग’ को बोझिलो परिचय बोक्नुपर्ने छैन । तर कुनै पनि मुलुक नै मालिक भएको क्लबसँगको युद्ध बार्सिलोनाले जित्न सक्ने स्थिती छैन । मेसी युद्धमा पिएसजी विजयी हुँदा अचम्म मानिएको छैन ।
नेइमार विक्रीकै पैसाले बार्सिलोनाले मेसीलाई महंगो सम्झौता दिन सक्यो । मेसीका मित्रहरुले पनि महंगो तलब पाए । यो पनि साँचो हो । मैदानमा पनि बार्सिलोनाको प्रदर्शन सन्तोषजनक नै थियो । तर एनफिल्डमा हार नबेहोरेको भए सन् २०१९ को च्याम्पियन्स लिगको उपाधि बार्सिलोनाले उचाल्ने थियो भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
विश्वभरका फुटबल समर्थकका लागि बार्सिलोना भ्रमण सपना रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
मेसीको आगमनले अब लिग वानले ‘फामर्स लिग’ को बोझिलो परिचय बोक्नुपर्ने छैन
तर कुनै पनि मुलुक नै मालिक भएको क्लबसँगको युद्ध बार्सिलोनाले जित्न सक्ने स्थिती छैन । मेसी युद्धमा पिएसजी विजयी हुँदा अचम्म मानिएको छैन ।
बार्सिलोनासँगको युद्ध जितेको पिएसजी पेरिसमा पनि अपराजित छ । विश्वभरबाट मेसीको जर्सीको माग भइरहेको छ । टेलिभिजनमा पिएसजीको खेल हेर्ने दर्शकको संख्या कयौँ गुणाले बढ्ने निश्चित छ । मेसीको आगमनले अब लिग वानले ‘फामर्स लिग’ को बोझिलो परिचय बोक्नुपर्ने छैन ।
फ्रान्सेली लिग केही समय यता आर्थिक संकटमा रहँदै आएको छ । टेलिभिजन प्रशारण अधिकार विक्रीको पैसा भने जति उठेन । तर मेसीबाट यो लिगको वर्तमान परिवर्तन सम्भव छ । हुनसक्छ, भविष्य पनि ।
मेसी सम्मिलत लिगको प्रशारण अधिकार किन्न कुन मिडिया लालायित नहोला ? फेरि गत सिजन लिलेसँग पिएसजीले लिग उपाधि दौड हारेपछि यो लिग प्रतिस्पर्धात्मक छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । त्यसमाथि मेसीको लोकप्रियताले पार्ने प्रभाव त छँदैछ । त्यही भएर त लिग वानका अध्यक्ष भिन्सेन्ट लाब्रुनेले पिएसजी अध्यक्ष नासेर अल खालेफीलाई मेसी खरिद गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
कोभिड १९ का कारण फुटबल अर्थतन्त्र थलिएकोे र टेलिभिजन प्रशारण अधिकार भने जति रकममा विक्री नभएका कारण फ्रान्सेली लिग नै आर्थिक संकटमा परेका बेला मेसी पेरिस पुग्नु अत्यन्तै सुखद घटना भएकोमा प्राय क्लब सहमत छन् ।
लाब्रुने जस्तै लोइक फेरी पनि मेस्सीको आगमनले गदगद छन् । फ्रान्समा सानो क्लबमध्येको एक मानिने एफसी लोरिएन्टका कार्यकारी अधिकृत रहेका फेरीले पिएसजीका कारण लिग वान विश्वकै बलियो लिगमध्येको एक मानिन थालेको बताए ।
मेसीका कारण पूरै लिग खुशी छ भने पिएसजीका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिन्हो खुसी नहुने कारण छैन । केही महिना अघि पोचेटिन्हो पिएसजीमा निराश भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । उनले इङ्ल्यान्ड फर्कने चाहना राखेका पनि थिए ।
पिएसजीमा पहिलो छ महिना पोचेटिन्हो निकै दबाबमा थिए । त्यसको एउटा कारण लिग नजित्नु पनि हो । नेइमार जस्ता खेलाडीलाई वर्षको तीन करोड युरो तलब दिँदा टिममा पैदा भएको असन्तुलनको स्थिती सम्हाल्ने जिम्मा पनि पोचेटिन्होकै काँधमा आयो । अब नेइमार भन्दा पनि ठूला खेलाडी आइपुगेका छन् । यसकारण खुशीसँगै पोचेटिन्होका लागि चुनौती पनि थपिएका छन् ।
पोचेटिन्होका लागि पिएसजी टोटनहयाम भन्दा बिल्कुलै फरक किसिमको क्लब हो । जहाँ स्टार खेलाडीहरुको जमात छ । उनीहरुले मैदानमा अन्य खेलाडीको जस्तो भोक नदेखाउन सक्छन् । भने जसरी ‘प्रेसिङ’ खेल प्रदर्शन नगर्न सक्छन् । यसकारण पिएसजीलाई युरोपियन च्याम्पियन बनाउने हो भने पोचेटिन्होले फरक शैली र रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
पोचेटिन्होेले विगतमा युवा खेलाडीहरुसँग काम गरेका छन् । उनले ती खेलाडीहरुको खेलस्तरमा सुधार ल्याएका छन् । तर पिएसजीमा प्राय सबै खेलाडी विश्वस्तरीय छन् । सही रणनीति अपनाउन सके लोभलाग्दो संख्यामा उपाधि जित्न सक्ने अवसर उनी सामु छ । सँगै स्थापित विस्वस्तरीय खेलाडीलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनीसँग छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा पिएसजीले कैयौँ स्टार अनुबन्ध गरेको छ । स्टार पनि यस्ता, जसको विश्वव्यापी लोकप्रियता छ, डेविड बेकह्याम देखि नेइमारसम्म । तर मेसीसँग उनीहरुको तुलना हुन सक्दैन ।
खालेफीले करिव १० वर्ष देखि पिएसजी सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी र कतारी सरकारका लागि पिएसजी फुटबल क्लब मात्र होइन, यो त राजनीतिक प्रोजेक्ट पनि हो । अनि सफ्ट पावर पनि । जसको उदेश्य कतारको छवी सफा बनाउने हो
पीएसजीले भविष्यमा च्याम्पियन्स लिग जित्न सक्छ । मेसीले आफ्नो करियरमा उपाधि थप्न सक्छन् । पोचेटिन्होले आफूलाई विश्व फुटबलको उत्कृष्ट प्रशिक्षक प्रमाणित गर्न सक्छन् । यी सबै भविष्यमा हात पर्न सक्ने सफलताका कुरा भए । तर अहिले नै विजेता बनेका चाहीँ अल खालेफी हुन् ।
खालेफीले करिव १० वर्ष देखि पिएसजी सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी र कतारी सरकारका लागि पिएसजी फुटबल क्लब मात्र होइन, यो त राजनीतिक प्रोजेक्ट पनि हो । अनि सफ्ट पावर पनि । जसको उदेश्य कतारको छवी सफा बनाउने हो । आसन्न विश्वकप सफलतापूर्वक आयोजना गर्नका लागि महोल बनाउन पनि कतारले पिएसजी उपयोग गरिरहेको छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा पिएसजीले कैयौँ स्टार अनुबन्ध गरेको छ । स्टार पनि यस्ता, जसको विश्वव्यापी लोकप्रियता छ, डेविड बेकह्याम देखि नेइमारसम्म । तर मेसीसँग उनीहरुको तुलना हुन सक्दैन । जो सानै उमेरदेखि बार्सिलोनासँग आबद्ध थिए । जसले अर्को जर्सीमा खेल्ने कल्पना समेत गरिएको थिएन ।
पिएसजी भनेको कतार । फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक मन पराइएका खेलाडीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्नु पिएसजीका लागि चानचुने सफलता होइन । पिएसजीको सफलता, कतारीको सफलता । कतारबारे थाहा पाउनेले पनि मानव अधिकार र आप्रवाशी कामदारमाथि हुने ज्यादतीका कारण थाहा पाएका हुन् । तर पिएसजीका कारण कतारको परिचय फेरिएको छ । अब त झनै मेसी थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझ्नेका लागि त कतार भनेकै पिएसजी हो । फुटबलमा लगानी गर्ने मुलुक हो
पछिल्ला १० वर्षमा पिएसजीले कैयौँ स्टार अनुबन्ध गरेको छ । स्टार पनि यस्ता, जसको विश्वव्यापी लोकप्रियता छ, डेविड बेकह्याम देखि नेइमारसम्म ।
तर मेसीसँग उनीहरुको तुलना हुन सक्दैन । जो सानै उमेरदेखि बार्सिलोनासँग आबद्ध थिए । जसले अर्को जर्सीमा खेल्ने कल्पना समेत गरिएको थिएन । तर उनी पिएसजीबाट खेल्न तयार भएका छन् ।
पिएसजी भनेको कतार । फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक मन पराइएका खेलाडीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्नु पिएसजीका लागि चानचुने सफलता होइन । पिएसजीको सफलता, कतारीको सफलता ।
कतारबारे थाहा पाउनेले पनि मानव अधिकार र आप्रवाशी कामदारमाथि हुने ज्यादतीका कारण थाहा पाएका हुन् । तर पिएसजीका कारण कतारको परिचय फेरिएको छ । अब त झनै मेसी थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझ्नेका लागि त कतार भनेकै पिएसजी हो । फुटबलमा लगानी गर्ने मुलुक हो
‘विश्व मानचित्रमा कतार सानो मुलुक हो । विश्वकप आयोजना अधिकार जित्नुअघि कतारका बारेमा जानकारी राख्नेको संख्या खासै थिएन भन्दा गलत हुँइदैन । कतारबारे थाहा पाउनेले पनि मानव अधिकार र आप्रवाशी कामदारमाथि हुने ज्यादतीका कारण थाहा पाएका हुन् । तर पिएसजीका कारण कतारको परिचय फेरिएको छ । अब त झनै मेसी थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझ्नेका लागि त कतार भनेकै पिएसजी हो । फुटबलमा लगानी गर्ने मुलुक हो,’ कुनैबेला कतारमा रहेका कूटनीतिज्ञ रहेका जेम्स लिन्चले भनेका छन् ।
पिएसजीले अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिग जित्न सकेको छैन । केही वर्षअघि फाइनलसम्म चाहीँ पुगेको हो । तर मेसी अनुबन्धन च्याम्पियन्स लिग जत्तिकै ठूलो उपाधि हो, पिएसजीका लागि । उनै मेसीले पिएसजीलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउन सक्छन् ।
भर्खर अजेन्टिनालाई कोपा च्याम्पियन बनाएका मेसीका लागि अबको चार महिना महत्वपूर्ण छ । किनभने यही चार महिनामा उनले बालन डी अर जित्ने सम्भावना अन्यको भन्दा बलियो बनाउन सक्छन् ।
पिएसजीबाट खेलेर बालन डी अर जित्ने खेलाडी जर्ज वेय मात्र हुन् । उसो त मेसीले बालन डी अर जित्दा अर्जेन्टिनाले मात्र होइन, कतारले पनि खुशीयाली मनाउनेछ ।
आगामी मेमा सेन्ट पिट्सबर्गमा च्याम्पियन्स लिग फाइनल हुनेछ । त्यस खेलले नयाँ च्याम्पियन जन्माउन सक्छ । पिएसजी विजेता बने कतारको पहिलो प्रोजेक्ट सफल बन्नेछ । त्यसपछि ध्यान विश्वकपतर्फ हुनेछ । जहाँ मेसी अर्जेन्टिनाको कप्तानका रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । पिएसजीका मेसी कतारी भूमिमा विश्वकप खेलिरहँदा कतार गर्वले फुल्नेछ । कतारी धन र विश्व फुटबलको नाता थप मजबुद बन्नेछ ।
आलोचनाका बाबजुद पनि कतार आफ्नो छबी सफा बनाउन लागीपरेको छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । यसकै लागि उपयोगमा आएका छन्, पीएसजी र विश्वकप आयोजना ।
कतार अहिले पनि आलोचनामुक्त भने छैन । आप्रवाशी कामदारको मानवअधिकार रक्षा हुन नसकेको भन्दै विश्वका कैयौँ मानव अधिकार संगठनले पटक पटक आलोचना गरिरहेका छन् ।
अनेकन आलोचनाका बाबजुद पनि कतार आफ्नो छबी सफा बनाउन लागीपरेको छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । यसकै लागि उपयोगमा आएका छन्, पीएसजी र विश्वकप आयोजना ।
कतार फुटबलका सुन्दर कथाहरुको सहयोगमा आप्रवाशी कामदारहरुको दुख छोप्नतिर मात्र लाग्छ कि, आफूलाई साँच्चैको मानव अधिकार हिमायतीमा परिणत गर्छ, भविष्यले देखाउने नै छ ।
(दी एथ्लेटिकको सहयोगमा)
‘चेन्ज एन्फा’ अभियान जारी नै छ